Shandong honglu rinorema bhizimisi co., LTD., Vemumapato kuna Shandong Tang boka, boka co., LTD., Yakavambwa muna 1956, boka vashandi vanhu zviuru zvitatu, zvekushandisa tsvakurudzo uye kukura chikwata vanhu vanopfuura mazana matatu, yakafambira mberi kugadzirwa mitsetse , yokunamisa workshop, nomoto workshop, vachinyatsogona workshop, ane mupfumi ruzivo mukurima, kutsvakurudza uye kubudirira.
tsvakurudzo kambani yedu uye kuvandudzwa inorema indasitiri ndiwo kare mumhuri kugadzira pakuchera kuputika-uchapupu youinjiniya muchini boka, vose kambani yayo zvemichina akazvimirira tsvakurudzo uye kukura, pamwe yakazvimirira rezvedzidzo kodzero, ndiyo huru mugodhi rubber_tyred chokufambisa kushamwaridzana nhengo, ndiro aifarirwa nevanhu bhizimisi benchmarking Enterprises.
Umbwa pakutanga pakati AnBiao aidaro chigadzirwa advertising, zvinodiwa advertising, zvigadzirwa zvose zvave National kuchengeteka muzinda yakaoma zvekushandisa odhita, ndiye kare mudzimba emakambani kuwana kuputika-uchapupu angu advertising. Kuburikidza National kuchengeteka rokuongorora centre uye vakachengeteka cherechedzo Bureau kwemajoini nzvimbo review, kuburikidza boka rakakwana seti unyanzvi data, siyana zvokushandisa, kugadzirwa vanokwanisa, uye vanopfuura 100 Software uye hardware.The wekambani zvigadzirwa vari zvinowanzoshandiswa wemarasha, phosphate mhangura , simbi mhangura nendarama yangu. The motokari uye nhengo dzayo, hurongwa uye nezvimwe zvirongwa dzave paakavapa yenyika bvumidzwa gwaro.
Sezvo National kuchengeteka zvinodiwa wemarasha uye zvangu, yangu kungoramba kumusoro nezvaidiwa zvokufambisa zvokushandisa, redu kugadzirwa kuputika-uchapupu uye akanyorova braking yokufambisa midziyo kambani kuwirirana zvinodiwa National kuchengeteka yangu, ndiko chigadzirwa rwokusarudza vakawanda guru boka. The kambani kunobva kumba uye anoenda kunyika. Zvichitevera munyika zvoupfumi zano, pamusoro pomugove kurutivi zvishoma kwazvo kuchinja uye itsva simba indasitiri, kugadzikana mudzimba musika migodhi, ramba kukudziridza matsva simba zvigadzirwa kuvandudza chigadzirwa ruzivo uye okutengesa. Achishingaira marongerwo nechepakati Asia, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia wokumwe kumusika. Uye muna Russia, Myanmar, Philippines uye dzimwe nyika makasimbisa noukama zvebhizimisi.
Shandong honglu rinorema bhizimisi co., LTD.Located mu migodhi ouinjiniya R & D uye anogadzira zvinhu michina uye zvikamu, kuomerera kune "basa, utsanzi, yakavimbika" pfungwa kukura, vanoomerera kuti "kuita zvakanaka kwazvo uye simba, muite refu" kukura of mutemo, chaitwa kuve zvipfuwo vomuzana kirasi, pose mukurumbira ouinjiniya muchini Enterprises.
Address: kwete . 1 meishan mugwagwa, zibo zvoupfumi vematunhu, zibo guta, Shandong province.